पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 25/03/2020)
यो थकित र सुस्त लामो रेल यात्रामा महसुस गर्न सजिलो छ. घण्टा को लागि एक रेल बसिरहेका पछि, यो सम्भव गर्दा आफ्नो खुट्टा सुत्छन् महत्त्वपूर्ण छ. को कैंटीन एउटा छोटो पैदल तपाईं समय प्रयोग गर्न र recharged महसुस गर्न मदत गर्नेछ. को लागि वाहनो मार्फत हिंड्न कैंटीन, को देखो परिदृश्य र आफ्नो रुचि को एक पेय केही मिठाई आनन्द
रेल द्वारा यात्रा हुन सक्छ सामाजिक अनुभव. नयाँ मान्छे बैठक रेलका मा अन्य मोड भन्दा सजिलो छ परिवहन. एक विमान विपरीत, तपाईं वरिपरि सार्न र अन्य यात्री संलग्न गर्न स्वतन्त्रता छ. यो तपाईं अन्य मानिसहरू र आफ्नो कथा सिक्न सक्छौं के आकर्षक छ – जीवनको बारेमा कुरा, काम र आफ्नो नेटवर्क बढ्न. Ask the person next to you about the book their reading, तिनीहरूलाई एक मिठाई प्रस्ताव वा बस बारेमा कुराकानी अप प्रहार गन्तव्य तिनीहरूले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ. यो कुराकानी पारित गरिएको छ तपाईं गर्दा छ रेल द्वारा युरोप यात्रा कि चिरस्थायी सम्झनाहरु सिर्जना.
लामो रेल यात्राको कहिलेकाहीं समयमा शान्त मात्र अवधि हो आफ्नो यात्रा. तपाईं अभ्क तेल हाल्नु र आफ्नो चुनिएको गन्तव्य लागि तयारी गर्न को लागि यो एक शानदार मौका हुन सक्छ. पिउन पानी प्रशस्त, केही खाना र यदि सम्भव छ भने खान, निद्रामा. तपाईंको अर्को गन्तव्य लागि तयार - बुद्धिमानीसाथ लामो रेल यात्रा प्रयोग तपाईं ताजा र energized महसुस गर्न मदत गर्नेछ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/things-long-train-journeys/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)